हिरा-पन्नाबाट बनेको चस्मा किन्ने हो ? मुगलकालीन चस्मा लिलामी हुँदै, मूल्य सुनेर उड्ने छ होस « Etajakhabar
हिरा-पन्नाबाट बनेको चस्मा किन्ने हो ? मुगलकालीन चस्मा लिलामी हुँदै, मूल्य सुनेर उड्ने छ होस
काठमाडौं । मानिसहरुको शौख अनौठा हुन्छन् । अधिकांश ब्यक्तिलाई दर्लभ र लाग्ने केही बस्तु सिमित ब्यक्तिको हातमा हुन्छ । हालै भारतमा यस्तै दुर्लभ बस्तु लिलामीमा विक्रीमा राखिने भएको छ । दुर्लभ हिरा र पन्नाबाट बनेका दुई मुगलकालीन चस्मा लिलामी हुने भएको छ। यसै महिनाको २७ तारिखमा बेलायतमा उक्त चस्माको लिलामी हुने भएको हो।
तर अहिलेसम्म यो चस्मा कुन शासकको खजानमा फेला परेको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको जनाइएको छ। लिलामी गर्ने सदबीज अक्सन हाउसका अनुसार हिरा र पन्नाबाट बनेको यो चस्मामा सन् १८९० को आसपास विशेष खालको फ्रेम लगाइएको थियो।
अक्सन हाउसका अनुसार दुई चस्मा लगभग २(३।४ मिलियन डलर ९करिब २४(४२ करोड रुपैयाँ० मा लिलामी हुने छ। लिलामी अगाडि हङकङ र लण्डनमा यसको पहिलो पटक प्रदर्शनी गरिएको थियो।
यो चस्मा कसले बनाए भन्ने स्पष्ट नभएपनि यसको सम्बन्ध मुगल शासकसँग रहेको अनुमान गरिएको छ। मुगल शासकले भारतीय उप महाद्वीपमा कयौं वर्षसम्म शासन गरेका थिए। मुगल काललाई उसको समृद्ध कलाकारीता र निर्माण शैलीका लागि चिनिने गरिएको छ।
काठमाडौ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको नेपालको विद्युत् मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि सरकारले अन्य मुलुकमा विद्युत्
काठमाडौं – भारतीय टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीलाई उत्कृष्ट फिनिसर मानिन्छ। उनले टी-२० क्रिकेटमा लक्ष्य
फेरि लखेटिए ऋषि धमला , अन्तरबार्ता लिन खोज्दा पर्यो यस्तो लफडा , हेर्नुहोस
काठमाडौ। काठमाडौ। प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध राजिनामाको बिषयमा छलफल भइरहेको ठाउँमा चर्चित पत्रकार ऋषि धमला प्रवेश